नेप्से बुधवार पनि बढ्यो, ६ % को सकारात्मक सर्किटपछि कारोबार बन्द
असार १७, काठमाडौं । शेयर बजार बढ्ने क्रम बुधवार पनि जारी रह्यो ।
बुधवार कारोबार खुलेको १ घण्टा १३ मिनेट अवधिभर तीन पटकको सकारात्मक सर्किट लागेर बजार बन्द भएको हो । कारोबार खुलेको १३ मिनेटमै ४ प्रतिशत बढेर पहिलो सर्किट लागेको थियो भने थप तिन मिनेट नपुग्दै दोस्रो सर्किट लागेको थियो ।
पहिलो सर्किटमा २० मिनेटको लागि र दोस्रो सर्किटमा ४० मिनेटको लागि कारोबार बन्द भएको हो । दोस्रो सर्किटपछि खुलेको बजार ६ प्रतिशत बढेपछि बुधवारकै लागि कारोबार बन्द भएको हो ।
बुधवारको कारोबारमा नेप्से परिसूचक ७५ दशमलव ७७ अंक बढेर १ हजार ३३६ दशमलव ५३ विन्दुमा पुगको छ ।
यस दिन १३५ कम्पनीको रू. ४० करोड ७३ लाख ५२ हजार बराबरको ११ लाख १ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन ३ हजार ८९० पटकको व्यापारमा सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल लाइफको प्रतिकित्ता रू. १२६० मा रू. ६ करोड ७६ लाख ९४ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । बढेको बजारमा मंगलवार नकारात्मक सर्किट लागेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्यमा बुधवार भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
यस दिन उक्त कम्पनीको रू. ३४ ले शेयरमूल्य बढेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीसहित ९ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । बुधवारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
नेप्से ३ अंकले बढ्यो, सबैभन्दा बढी कारोबार प्रभु बैंकको संस्थापक शेयरको (१ बजेको अपडेट)[२०७७ असार, २९]
१३४४.०२ विन्दुमा नेप्से, ३० करोडभन्दा बढीको शेयर खरीदविक्री (१२ बजेको अपडेट)[२०७७ असार, २९]
एनआईसि एशिया लघुवित्तको शेयर मूल्यमा १० % वृद्धि[२०७७ असार, २९]
९ अंक बढेको बजारमा १ अर्बमाथिको कारोबार, ६ ओटा कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट [२०७७ असार, २८]